Global Voices · Pamela Mutamba – Contributor profile
View all contributors Pamela Mutamba RSS
joined 27 August 2010 · 4 posts	Email Pamela Mutamba	Latest posts by Pamela Mutamba 18 October 2011
Zimbabwe: Deportations of Zimbabweans a Political Move Written by Pamela Mutamba · Sub-Saharan Africa “Mwana washe muranda kumwe” is an old Zimbabwean saying which means that when one is a foreigners they are a nobody in the eyes of the host country and this... 7 February 2011
Zimbabwe: Meet Zimbabwean blogger and poet, Mcgini Nyoni Written by Pamela Mutamba · Zimbabwe Zimbabweans are leaving their mark in the world of blogs and other social media tools. Zimbabwean blogger, poet, playwright and writing instructor, Mcgini Nyoni, is not an exception. Mcgini is... 20 October 2010
Zimbabwe: Update on Zimbabwe's New Draft Constitution Written by Pamela Mutamba · Sub-Saharan Africa Zimbabweans are discussing the proposed draft of a new constitution. This will be Zimbabwe's second constitution. A proposed new constitution to replace the Lancaster House Agreement of 1979 was approved... 11 September 2010
Zimbabwe: The Constitution-Making Process in Zimbabwe Written by Pamela Mutamba · Sub-Saharan Africa Zimbabweans are currently participating in a constitution-making process. The government and Non-Governmental Organisations in Zimbabwe are carrying out outreach programs to gather public views on the New Zimbabwe Constitution.